Andohatapenaka : Mpitondra môtô voafaokan’ny fiara -
AccueilSongandinaAndohatapenaka : Mpitondra môtô voafaokan’ny fiara
Andohatapenaka : Mpitondra môtô voafaokan’ny fiara
10/10/2018 admintriatra Songandina 0
Lozam-piarakodia tao anaty ora-nikija. Nihosin-drà ny rano nianjeran’ireto mpitondra môtô nifanehitra tamin’ny taksibe teo anoloan’ny Microcred Andohatapenaka hihazo eny Itaosy. Io no vokatry ny fifandonana teny an-toerana, ny alin’ny alatsinainy lasa teo, tokony ho tamin’ny 8ora. Araka ny loharanom-baovao dia noho ny firimorimon’ilay fiara no nahatonga ny loza, ka nifaoka lehilahy roa nanao taingin-droa tamin’ny môtô “cross”. Namoy ny ainy avy hatrany ny lehilahy iray 23 taona.
Voalaza fa nisongon-dalana io môtô io ity taksibe ity, niala lalana azy ihany ireto farany ka voadona ny fiara hafa avy aty aoriana. Potika tsy nisy azo noraisina vokatry ny fifandonana ilay môtô, ary nipitika teny afovoan’arabe ireo roalahy. Nambaran’ny zandary tamin’izany fa nifanenjika ny roa tonta. Teo amin’ny fiolanana no nitranga ny loza, ka azo heverina ho tsy nahatana ny familiana intsony ny fiara no nahatonga ny loza. Nandritra izany dia nitsoaka ny mpamilin’ilay fiara nahavanona ny loza, araka ny fanazavana voaray. Nisy ny fampandrenesana ny mpitandro filaminana teny an-toerana taorian’ny fahavoazany. Ora vitsy taorian’izay dia tonga nijery ifotony ireo zandary nanao fitsirihana, ary mitohy ny fikarohana ilay mpamily nahavanon-doza. Tamin’ny fitsirihana ny vatana mangatsiakany no nahafantarana fa tapaka ny hatony, ary voa mafy teo amin’ny lohany no nitarika ny fahafatesan’ity farany, raha toa ka tsy naninona ilay mpamily ilay môtô. Raha ny fantatra, efa matetika ny fahadisoan-dalana ataon’ ny fiara mandalo eny amin’iny manodidina an’Andohatapenaka iny. Saika mirimorimo avokoa izy ireo raha mahazo iny lalan’Ivato hihazo an’Andohatapenaka, hatreny amin’ny vatobe 67 ha iny, noho ny lalana somary malalaka rehefa hariva tahaka ity. Tsara marihina ihany koa , fa tao anatin’ny orana nikija no nitranga ny loza, ary avy dia nanararaotra nandositra tao anatin’izay ilay mpamily. Efa eo am-pelatanan’ny polisy kosa ny raharaha ankehitriny.
Matetipi-tranga tato ho ato ny lozam-piarakodia eto amintsika, izay noho ny tsy fitandremana sy ny fandikan-dalàna ataon’ny mpamily no tena antony. Tahaka ity niseho teny Ambohimangakely ny antoandron’ny alahady lasa teo, tokony ho tamin’ny 11 ora antoandro. Kamio mpitaona entana iray hafa ihany koa no nahafaty olona teny an-toerana. Raha ny nambaran’ny zandary nisahana ny raharaha. Niampita tampoka ity tovovavy 15 taona ity vantany vao nidina tamin’ny taksibe nitondra azy, ka izao voahitsaky ny fiara lehibe izao. Tsy afaka fa tery tao ambany kodiarana ny kibony nandritra izany, ka ny mpitandro filaminana tonga teny an-toerana vao natao ny fisokirana azy. Naratra ary efa tsy nahatsiaro tena ity farany no nentina teny amin’ny toeram-pitsaboana, saingy tsy tana ny ainy noho ny fahavoazany, izay sady voa mafy teo amin’ny kibony sy ny lohany. Taorian’izay, efa noraisin’ny zandary ny fanadihadiana momba ity raharaha ity.
Taorian’ny fanokafana indray ny masoivohon’i Madagasikara tany Londres, nisesy indray omaly teny Anosy, ny fitsidihan’ireo masoivoho vahiny monina sy miasa eto amintsika ny minisitry ny Raharaham-bahiny (MAE) vaovao, Henry Rabary-Njaka. Tonga niarahaba sy ny nidinika ...Tohiny